Madaxweyne Qoor Qoor oo Xalay ka hadlay Maamulada Shirka ka maqan iyo Fakarkooda | Mudug24
Madaxweyne Qoor Qoor oo Xalay ka hadlay Maamulada Shirka ka maqan iyo Fakarkooda
Madaxweynaha Mamaulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor qoor ayaa sheegay in shirkii Dhuusamareeb3 uu ahaa mid mid guul usoo hoyn kara umadda Soomaaliyeed.
Qoorqoor oo khudbad ka jeediyay xafladda xiritaanka Shirkii Dhuusamareeb3 ayaa sheegay in ay qadadarin iyo sharaf u haayaan madaxda ka maqan shirka uu ula jeeday madaxda Mamaulada Jubbaland iyo Puntland.
Waxaa uu sheegay in ay soo dhaweynayan cid kasta oo ka ra’yi duwan maadxdii ku shirtay Dhuusamareeb, isagoo sheegay in mucaarad iyo muxaafad cid kastoo oo ka aragti duwan ay soo dhaweynayaan, balse waxaa uu sheegay in loo baahan yahay in laga waantoomo dad uu ku sheegay kuwao dano gaar ah wata oo tan iyo markii shiku billowday bulshada Soomaaliyeed ku dhex faafinayay daacayado la xariira shikii lasoo gaba-gabeeyay.
Beesha caalamka ayuu kaga mahad celiyay sidii ay shirka u garab istaageen, waxaana intaas uu ku daray qoor daray qoorqoor in beesha calamka iyo daneeyaasha arrimaha siyaasadda Soomaaliya ay garb taagan yihiin Soomaaliya.
Bulshada uu maadxweynaha u yahay ee reer Galmudug ayuu si gaar ah ugu mahad celiyay qaabka ay gogosha shirka u qaabileen, waxaana uu ku tilmaamay taariikh gaar ah oo uu sameeyay maamulkiis iyo dhammaan Bulshada Galmudug.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo ka hadlay go’anka Puntland iyo Jubbaland iyo Shirka soo dhamaaday
Next articleMadasha Xisbiyada Qaran oo mowqif lama filaan ah ka qaadatay heshiiskii Dhuusamareeb III